EDU ROAD SHOW
DOCUMENTS TO APPLY STUDENT PASS
NTU – PGAdmission
USA College Program
ကျောင်းသူကျောင်းသားများ Singapore, UK, Australia, Canada, USA နိုင်ငံတွင် ပညာသင်ကြားနိုင် ရန် ၊ကျောင်းလျှောက်ထားခြင်း ၊ Student Pass လျှောက် ထားခြင်း စသည့် လိုအပ်သော ၀န်ဆောင်မှု များအား ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် CROWN Education ဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားသော နိုင်ငံအသီးသီးရှိ ကျောင်းများ သို့လျောက်ထားခြင်း အတွက် Crown Education သို့မည်သည့် ၀န်ဆောင်ခ (စာရွက်စာတမ်းကြေး) မှ ပေးဆောင် ရန် မလိုအပ်ပါ၊၊
ကျောင်းများ လျှောက်ထားရာတွင် -
Student Pass လျှောက်ထားခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော စာရွက်စာတမ်းများ ပြင်ဆင် ပေးခြင်း၊ (ဥပမာ အလုပ်အကိုင်နှင့် ပတ်သက်သော ထောက်ခံစာများ၊ အချို့သော ကျောင်းများဧ။် လိုအပ်ချက်အရ မိဘများဧ။် ဘဏ္ကာရေး ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ အထောက်အထားများ ပြင်ဆင်ပေးခြင်း၊)
စာရွက်စာတမ်းများ နိုတြီ ပြန်ဆိုခြင်း အတွက် စီစဉ် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
(နိုတြီ ပြန်ဆိုရာတွင် ကျသင့်သော အခကြေးငွေများကို ကျောင်းသူကျောင်းသား မှ ပေးဆောင်ရန် ဖြစ်ပါသည်၊)
ကျောင်းသားများ နှင့် အတူ လိုက်ပါသော မိသားစုများအား Entry Visa ၀င်ပေးခြင်း၊၊ သံရုံးသို့ ပေးဆောင်ရသော ဗီဇာကြေးနှင့် Documentation Fees အတွက် သာ ပေးဆောင် ရပါမည်၊၊ ၀န်ဆောင်ခ ပေးရန်မလိုပါ၊၊ (ဤ ၀န်ဆောင်မှု့ သည့် စင်္ကာပူ နိုင်ငံနှင့် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ အတွက်သာ အကြုံးဝင် ပါသည်၊၊)
Bank Statement / Recommendation နှင့် ပတ်သက်၍ အကြံပေးခြင်း စာရွက်စာတမ်းများ စစ်ဆေးပေးခြင်း၊၊ (BANK စာရွက်စာတမ်းအတုများပြုလုပ်မပေးပါ၊၊)
Air Ticket Booking စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
လေယာဉ်ပျံ လက်မှတ် စီစဉ် ဆောင်ရွက်ပေးရာတွင် ၊ Crown Education မှ Student Pass ရရှိ သည့်အချိန် နှင့် ကိုက်ညီ၍ လေယာဉ်ပျံလက် မှတ်ကို စီစဉ် ဆောင်ရွက်ပေးမည် Air Ticket Confirmation ဖြစ်ပါက ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသား မှ Airticket Agency တွင် လေယာဉ်ပျံ လက်မှတ်ခကို မိမိကိုယ်တိုင် ပေးချေပြီး သွားရောက် ထုတ်ယူရန် ဖြစ်ပါသည်၊၊
Air Port Pick-up အတွက်စီစဉ်ဆောင်ပေးခြင်း၊
(၄င်း Air port pick-up နှင့် ပတ်သက်၍ စင်္ကာပူရှိ Service Provider သို့ Air Port Pick-up Fees S$ 50/- သီးသန့်ပေးဆောင်ရန် လိုအပ် ပါသည်၊၊ Air Port Pick-up ၀န်ဆောင်မှု စီစဉ် ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ရန် Crown Education သို့ စင်္ကာပှုသို့ မထွက်ခွာမှီ တစ်ပတ်ကြိုတင် အကြောင်းကြားရန် လိုအပ်ပါသည်။) အင်္ဂလန်အတွက် သီးသန့် အစီအစဉ်ရှိပါသည်၊၊
Temporary Accommodation Arrangement စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် အိမ်ခန်းငှားခြင်း ၊ တိုက်ခန်းငှားခြင်း ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ရာတွင်၊ Brokers များဖြင့်စီစဉ်ဆောင်ရွက်လေ့ ရှိကြပါသည်။ Broker Fees ကို အိမ်ခန်း၊ တိုက်ခန်း ငှားခဧ။် တစ်လခ (သို့မဟုတ်) ၅၀% ကို ပေးခြေရလေ့ရှိပြီး၊ ပွဲစားထံသို့ တစ်လခန့်ကြိုတင် အကြောင်းကြား စရံငွေပေး ၍ မိမိတို့ဧ။် စိတ်ကြိုက် နေရာများ ကို ရှာဖွေ နိုင်ပါသည်။
နေရေးထိုင်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ အခက်အခဲရှိသောကျာင်းသူကျာင်းသားများအတွက် Crown Education မှ စင်္ကာပူတွင် ခေတ္တနေထိုင်ရန် စီစဉ် ဆောင် ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်ပြီး၊ တစ်ရက် လျှင် အခန်းတစ်ခန်း S$ 50/- မှ S$ 120/- (နေရာ နှင့် facilities ပေါ်တွင်မှုတည်၍ ဈေးနူန်း အပြောင်း အလဲရှိ နိုင်ပါသည်။) နုန်းခဖြင့် (၅)ရက် (သို့မဟုတ်) (၇)ရက် အနည်းဆုံး နေထိုင် ရန်လိုအပ်ပါသည်။ Location, Facilities မှာ available ဖြစ်မည် နေရာပေါ်မှု တည်ပါသည်။ အဆိုပါဝန်ဆောင်မှု့ အတွက် မိမိတို့နေလိုသည့် ရက်မှ (ရ)ရက်ကြိုတင် အကြောင်းကြား ရန်လိုအပ်ပြီး၊ နေရာ ထိုင်ခင်း ပိုင်ရှင်သို့စရံငွေကြို တင်ပေးခြေ ရလေ့ရှိပါသည်၊၊ အင်္ဂလန် နိင်ငံအတွက် သက်ဆိုက်ရာ Agency များဖြင့် ချိတ် ဆက်ပေးပါမည်၊၊
အင်္ဂလိပ်စာ နှင့် အထွေထွေ ဗဟုသုတအတွက် ပြင်ဆင်ပေးခြင်း
၀န်ဆောင်ခပေးရန်မလိုအပ်သော ကျောင်းများသို့မှတ်ပုံတင်ကြေးပေးသွင်းပြီးပါက၊ CROWN Education Training Center တွင် မည့်သည့် အင်္ဂလိပ်စာတန်း မဆိုအခမဲ့ (စာရွက်စာတမ်းကြေးများလည်းထပ်မံမကောင်ခံပါ) တက်ရောက်ခွင့်ရမည်ဖြစ်ပါသည်၊၊
IELTS Foundation/Preparation Course
21st Century Life Style English
CROWN Education Training Center တွင် သင်တန်းကြေးပေးသွင်းတက်ရောက်နေသော ကျောင်းသူကျောင်းသားများအနေဖြင့်၊ နိုင်ငံတကာရှိ CROWN Education ဖြင့်ချိတ် ဆက်ထားသော၊ ၀န်ဆောင်ခပေးရန်မလိုအပ်သည့် ကျောင်းများသို့တက်ရောက်ရန် ကျောင်း လျှောက်ထားပါကသက်ဆိုင်ရာ ကျောင်း သို့ ပေးသွင်းရမည့် Application Fees ၏ 25% သို့ မဟုတ် 50% ကို Discount ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်၊၊
ကျောင်းသားမှ သီးသန့် ရွေးချယ်ထားသော ကျောင်းများကို လျောက်ထားပေးခြင်း
စင်္ကာပူအစိုးရတက္ကသိုလ်များသို့ လျောက်ထားခြင်းအတွက်၊ ကျောင်းများသို့ ပေးသွင်းရမည့် Application Fees နှင့် ပေးသွင်းရမည့် Bank Charges အတွက် ကျပ် (၅) သောင်းနှင့် ၀န်ဆောင်ခ ကျပ်(၅) သောင်း ကျသင့်ပါသည်၊၊ Courier Fees ကိုကျောင်းသားမှပေး ဆောင်ရပါမည်၊၊
NUS-iSS မှဘွဲ့ လွန်ဒီပလိုမာအတွက် CROWN Education သည်တရားဝင်အသိအမှတ်ပြု Agency အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးပြီး၊ ၀င်ခွင့်စာမေးပွဲ ပြင်ဆင်ခြင်း သင်တန်းများအတွက်ပါ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်၊၊ ရက်တိုဝင်ခွင့်သင်တန်းပို့ ခြပေးခြင်း၊ လျှောက်လွှာတင်ပေးခြင်း၊ ၀င်ခွင့်ဖြေဆိုခွင့်ရရန် စီစဉ်ဆောင် ရွက်ပေးခြင်း၊ ၀င်ခွင့်ရရှိပါက Student Pass လျှောက်ထားပေးခြင်း များအတွက်၊ ၀န်ဆောင်ခ (၁)သိန်းဖြစ်ပါသည်၊၊
စင်္ကာပူအစိုးရတက္ကသိုလ်များသို့ လျောက်ထားခြင်းအတွက် ၀န်ဆောင်ခ ကျပ်(၅) သောင်း၊ ဖြစ်ပြီး Courier Fees ကိုကျောင်း သားမှ ပေး ဆောင် ရပါမည်၊၊နှစ်စဉ် အလိုက် ခေါ်ယူလေ့ရှိ သောဘာသာရပ်များ၊ မိမိတို့ရရှိ သည့် အမှတ်အလိုက် ၀င်ခွင့်ရရှိနိုင်သော ဘာသာရပ်များကို ရွေး ချယ် အကြံပေးပါမည်၊၊ ပဏာမ စာရင်း တွင် ရွေးချယ်ခံရပါက၊ လိုအပ်သည့် ပြင်ဆင်မှု့ များအ တွက်လည်း၊ စီစဉ်ဆောင်ရွက် ပေး ပါမည်၊၊
ကျောင်းသားရွေးချယ်ထားသည့် အင်္ဂလန်မှ မည်သည့် ကျောင်းမဆို လျှောက်ထားပေးခြင်း အတွက် လျောက်ထားမည့် ကျောင်းမှ Offer Letter ရရှိလျင် ကျပ် (၅) သောင်း၊ Confirmation for Acceptance Letter အတွက် ကျပ်(၅)သောင်း၊ နှင့် ဗီဇာရရှိလျင် ကျပ်(၅) သောင်း ကျသင့်ပါ သည်၊၊ ကျောင်းများ သို့လျောက် ထား ရာတွင်၊ (၁) လအတွင်း Offfer Letter မရရှိပါက ကျပ်(၅)သောင်း ကို ကျောင်း သား ကျောင်း သူသို့ပြန် လည် ပေးအပ်ပါ မည်၊၊
IELTS/TOEFL ရမှတ် မရှိသူများအတွက်
IELTS / TOEFL ရမှတ်မရှိသောကျောင်းသားကျောင်းသူများအား ၊ သက်ဆိုင်ရာ ကျောင်းဧ။် ၀င် ခွင့်စာမေးပွဲအား Crown Education တွင်ဖြေ ဆိုနိုင် ရန်စီစဉ်ပေး ပါသည်၊၊ IELTS/TOEFL ရမှတ်မပါဘဲ လျောက်ထားနိုင်သောကျောင်းများစာရင်းကို သီးသန့်တောင်းယူ နိုင်ပါသည်၊၊ (စာမေးပွဲကြေးပေးဆောင်ရန် မလိုအပ်ပါ၊)
We understand that choosingasubject to study is one of the most important decisions you will take in your life. It setsafoundation for the rest of your professional life and to quite an extent your personal lifeCROWN Education team has first-hand experience balancing the needs of students’ vocational and academic educational pathway. We are committed and dedicated towards providing education consultancy services to Myanmar students.
CROWN Education was established by U Aung KyawSan @ James who has nearly 10 years’ experience in international education. Our Team already helped over 500 STUDENTS to study at Singapore, Malaysia, Australia and UK.
ACHIEVEMENT : SINGAPORE EDUCATION SPECIALIST (2007) – (SINGAPORE TOURISM BOARD)
JAMES COOK UNIVESITY’s BEST AGENT 2010 & PARTNERSHIP AWARD 2012 ,2013
CROWN Education has been awarded BEST AGENT (2010) & BEST PARTNERSHIP AWARD (2012),(2013)
British Council UK Education Agent Certificate Holder
CROWN Education is First Myanmar Agency awarded British Council Education UK Agents Training Certificate with Distinction by British Council Myanmar.
OUR Partner Universities	; CROWN Facebook	Recent Post Our Services
December 20, 2013 By webmaster
© 2014 CROWN Education. All Rights Reserved. Powered by WordPress | Designed by: HostStore | Thanks to Business WordPress Theme, Wicked San Antonio and Janet Jackson Tour